စိတ်တိုင်းကျ အဝတ်အထည် အထည်ချုပ် ရုပ်ထွက် ထိန်သိမ်း နှင့် ရုပ်ထွက် စားပွဲ လက်ကား ထုတ်လုပ်သူ | Oujia
Oujia- Professional Clothing Display Racks လက်ကားနှင့် Boutique Furniture ထုတ်လုပ်သူ
မင်္ဂလာဝတ်စုံ Display Rack
အဝတ်အစား Display Rack / Stand
ခါးပတ်၊ လက်ကိုင်အိတ် Display Rack
စူပါမားကတ် Display Rack
ပိုစတာ Display Rack
Lady Clothes Shop Project ၊
Wall Shelf Rack ယူနစ်
Gondola Shelving စီမံကိန်း
Optical Shop ပရောဂျက်
OUJIA ဟာ့ဒ်ဝဲ မျက်နှာပြင်
Professional Clothing Display Rack လက်ကားနှင့် B​outique Furniture ထုတ်လုပ်သူ
အဝတ်အစားပြကွက်များကို လက်ကားရောင်းချခြင်း - ကျွန်ုပ်တို့၏ ရည်မှန်းချက်မှာ သုံးစွဲသူတိုင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကုန်ပစ္စည်းများကို ၎င်းတို့၏ အသုံးချမှုတွင် သက်တောင့်သက်သာ နှင့် ယုံကြည်စိတ်ချစွာ အသုံးပြုနိုင်စေရန် တိကျသေချာပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသော အရည်အသွေးဖြင့် သုံးစွဲသူများကို ကျေနပ်စေရန် ဖြစ်ပါသည်။ Oujia ၏အဓိကထုတ်ကုန်များမှာ အဝတ်အထည်ပြခန်း၊ အထည်အလိပ်ပြခန်း၊ စားပွဲနှင့် လက်လီအရောင်းဆိုင်များအတွက် အခြားပြကွက်များဖြစ်သည်။
လက်လီ Store မှာအဝတ်အစား Display ကိုရပ်နဲ့ LED အလင်းဆိုင်ပရိဘောဂပေးသွင်းများအတွက်အကောင်းဆုံးဖက်ရှင်စတိုးအဝတ်အစား Display ကိုသိုလှောင်ဆင်
ဦးဆောင်ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းနှင့်အတူဖက်ရှင်စတိုးအဝတ်အစား display ကိုထိန်သိမ်းအတွက်ကိုယ်ပိုင် sophysticated အတွေ့အကြုံကို Oujia, ဒီဦးဆောင်သည့် display ကိုထိန်သိမ်းစီးရီး၌အကြှနျုပျတို့၏ပူရောင်းချဒီဇိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ငါတို့သည် OEM display ကိုထိန်သိမ်းအပေါ်ကွဲပြားခြားနားသောဦးဆောင်ဒီဇိုင်းကိုလုပျနိုငျ& လိမ္မော်ရောင်ရရှိနိုင်Led အလင်းနှင့်အတူရွှေလက်လီဖက်ရှင်စတိုးအဝတ်အစား Display ကိုသိုလှောင်ဆင်
ပရော်ဖက်ရှင်နယ် Black Retail Shop Fittings သတ္တုအဝတ်အထည် Display Rack ထုတ်လုပ်သူ-Oujia
ပရော်ဖက်ရှင်နယ် လက်လီအရောင်းဆိုင် ပရိဘောဂများနှင့် စတိုးဆိုင် ပရိဘောဂ ထုတ်လုပ်သူ--OUJIA၊ဆိုင်သုံးပစ္စည်းများအားလုံးကို အရည်အသွေးမြင့် သံမဏိပစ္စည်းများနှင့် စက်ရုံတိုက်ရိုက်ရောင်းချခြင်းတို့ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့တွင် display rack ထုတ်လုပ်မှုတွင် အတွေ့အကြုံ 15 နှစ်ကျော်ရှိသည်။OEM& ODM ရရှိနိုင်ပါပြီ။
ပရော်ဖက်ရှင်နယ် တရုတ်နိုင်ငံတွင် လူကြိုက်များသော Stainless Steel Clothing Display Rack ထုတ်လုပ်သူ-Oujia ထုတ်လုပ်သူများ
Oujia Professional China လူကြိုက်များသော Stainless Steel Clothing Display Rack ထုတ်လုပ်သူ-Oujia manufacturers.we သည် display rack ထုတ်လုပ်မှုတွင် 15 နှစ်အတွေ့အကြုံထက်ပိုသောထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အားကောင်းသောထောက်ပံ့ရေးစွမ်းရည်ရှိသည်။ OEM& ODM ကို ဤနေရာတွင် ရနိုင်ပါသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ Oujia မှ စိတ်ကြိုက်ရွှေရောင် အထည်အလိပ်အဝတ်အထည် Display Rack ထုတ်လုပ်သူ
OJ-NP-001စိတ်ကြိုက် Gold Boutique အဝတ်အထည် Display Rack ထုတ်လုပ်သူ တရုတ်နိုင်ငံမှOujia ကို နိုင်ငံတကာ ထုတ်လုပ်မှု စံနှုန်းများနှင့်အညီ အပြည့်အ၀ ပုံဖော်ထားသည်။Oujia Introto China Oujia မှ ထုတ်လုပ်သူ စိတ်ကြိုက်ရွှေရောင် အရောင်းဆိုင် အဝတ်အထည် Display Rack ထုတ်လုပ်သူ၊3.ကျွန်ုပ်တို့တွင် အလုပ်အကိုင် R ရှိသည်&D အဖွဲ့၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် led နှင့် magnetic leviation နည်းပညာဖြင့် diplay ပရိဘောဂများကဲ့သို့သော အဆင့်မြင့်နည်းပညာသုံး case ကိုယူနိုင်ပါသည်။
China Three Colour Led Light Transformamtion Acrylic Magnetic Leviation Floating Shoe Display Stand ထုတ်လုပ်သူ- Oujia
အားသာချက်များ 1.2.ကျွန်ုပ်တို့၌ ပြီးပြည့်စုံသော ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်ရှိသည်၊ သင်အလိုရှိသမျှ ကျွန်ုပ်တို့လုပ်နိုင်သည် 2.5.ကျွန်ုပ်တို့သည် ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးကိုသေချာစေရန် အရည်အသွေးထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့ ရှိသည် 3.4.ကျွန်ုပ်တို့သည် ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင် ခိုင်မာသောထောက်ပံ့ရေးစွမ်းရည်ရှိသည်။ 4.3.ကျွန်ုပ်တို့တွင် အလုပ်အကိုင် R ရှိသည်။&D အဖွဲ့၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် led နှင့် magnetic leviation နည်းပညာဖြင့် diplay ပရိဘောဂများကဲ့သို့သော အဆင့်မြင့်နည်းပညာသုံး case ကိုယူနိုင်ပါသည်။
သတို့သမီးဝတ်စုံဆိုင်မင်္ဂလာဆောင် Dress ပြခန်း Oujia များအတွက် High Quality သံကြမ်းပြင် Display ကိုရပ်
သတို့သမီးဝတ်စုံဆိုင်မင်္ဂလာဆောင် Dress ပြခန်းများအတွက် Introto High Quality သံကြမ်းပြင် Display ကိုရပ်ဤသည်မှာ 2021 ခုနှစ်တွင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်အသစ် (OUJIA) ဖြစ်ပါသည်ကုန်ပစ္စည်းအမည်: မင်္ဂလာဆောင် Dress Display ကိုရပ်item အဘယ်သူမျှမ: OJ-CR78Dimension: (ဦးရစ်သရဖူနှင့်အတူ) * 400 2000 * 2300mm2000 * 400 (ပန်းဦးရစ်သရဖူကိုမပါဘဲ) * 2100mmလျှောက်လွှာ: သတို့သမီးဝတ်စုံဆိုင်ပြခန်းအရောင်: ရွှေ / Black ကပစ္စည်း: သံ / သံမဏိမျက်နှာပြင်ကုသမှု: Powder Coatingစွမ်းဆောင်ရည်: 20kg ထက်ပိုfeature: အကြီးစားတာဝန်
မင်္ဂလာဝတ်စုံအတွက် လက်ကားရောင်းချသော စိတ်ကြိုက်ရွှေစင်စတီးလ်ပြကွက် တွဲလောင်းရထား
Oujia Introto မင်္ဂလာဆောင်ဝတ်စုံအတွက် စိတ်ကြိုက်ရွှေသံမဏိစတီးလ်ပြကွက် တွဲလောင်းရထားတွဲ Oujia၊၃။ကျွန်ုပ်တို့တွင် အလုပ်အကိုင် R ရှိသည်&D အဖွဲ့၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် led နှင့် magnetic leviation နည်းပညာဖြင့် diplay ပရိဘောဂများကဲ့သို့သော အဆင့်မြင့်နည်းပညာသုံး case ကိုယူနိုင်ပါသည်။
ရွှေအဝတ်အထည်ထိန်သိမ်း လက်လီအဝတ်ရှောင် အထည်ချုပ် အထည်ဆိုင် ပရိဘောဂပွဲခင်းကျင်းပြသ
ရွှေအဝတ်အစားထိန်သိမ်း ထုတ်ကုန်အင်္ဂါရပ်1. အဓိကပစ္စည်းများ: စတီးလ်စတီးလ်2. စိတ်တိုင်းကျ ဒီဇိုင်းများကို ကြိုဆိုပါသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဒီဇိုင်နာများသည် သင့်တောင်းဆိုချက်အရ 3D ပုံနှင့် အင်ဂျင်နီယာပုံများကို ဖန်တီးနိုင်ပါသည်။3. အထူးတောင်းဆိုထားသောပစ္စည်းများကို ရနိုင်ပါသည်။4. မတူညီသော လိုဂိုဖြေရှင်းချက်များသည် သင့်အကြိုက်ဆုံးများနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။5. အရာအားလုံးကို စက်ရုံတွင် ကြိုတင် တပ်ဆင်ထားပြီး၊ သင်လက်ခံရရှိပြီးနောက် အသုံးပြုရန် အသင့်ဖြစ်နေပါပြီ။6. ကျွန်ုပ်တို့ထုတ်လုပ်သောရွှေအဝတ်အစားထိန်သိမ်းသည် အရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြီး အချိန်နှင့်တပြေးညီ ပို့ဆောင်ပေးပါသည်။7. တစ်ခုချင်းစီအပိုင်းအစတစ်ခုစီကိုသီးခြားသစ်သားသေတ္တာထဲသို့ကောင်းစွာထုပ်ပိုးထားပြီး၊ ပို့ဆောင်ရာတွင်လုံခြုံသည်။8. စတိုးဆိုင် အရောင်းပြခန်းနှင့် ကုန်တိုက် အရောင်းဆိုင်များ၏ ဒီဇိုင်းနှင့် ထုတ်လုပ်ခြင်း။ထုတ်ကုန်လျှောက်လွှာ-OUJIA သည် ၎င်း၏တည်ထောင်ချိန်မှစ၍ လက်ဝတ်ရတနာ၊ အဝတ်အစား၊ ဖိနပ်နှင့် စူပါမားကတ်များကဲ့သို့သော မတူညီသောစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက် အရည်အသွေးမြင့် အရောင်းပြခန်းနှင့် စျေးဝယ်ကုန်တိုက် kisok ကို ပံ့ပိုးပေးလျက်ရှိသည်။
Introto Custom Black Boutique Clothing Store Display stand Decoration Metal Rack အထည်ချုပ်ဆိုင်၊
ဤအနက်ရောင်အဝတ်အစား Display Stand သည်စျေးကွက်တွင်ရေပန်းအစားဆုံးဒီဇိုင်းဖြစ်သည်။စိတ်ကြိုက်ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ODM&OEM ဝန်ဆောင်မှု ရရှိနိုင်ပါသည်။လျှောက်လွှာ - အထည်ဆိုင်၊ အထည်ဆိုင်၊ အရောင်းဆိုင်အလှဆင်ခြင်း။ပစ္စည်း- သတ္တု သံမဏိ ထိန်သိမ်းအရောင်ကို စိတ်ကြိုက်၊ အနက်/ရွှေ
Introto ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းအဝတ်အစားအဝတ်အစား Store ကိုပြရန်ရပ်အမှတ်တရအဝတ်အစား Display ကိုတပ်ဆင်ထားသည့် LED အလင်း Oujia နှင့်အတူ Store မှာအမှတ်တရစင်ပေါ်ထိန်သိမ်း
YW-LED-UP003Display ကိုထိန်သိမ်း LED ။ ပိုပြီးသက်ဆိုင်ကြောင့်အတူပေါင်းစပ်ပြီး။ ရုပ်တုဆင်းတုကိုသူတို့တတ်နိုင်သမျှအကောင်းဆုံးအရည်အသွေးမှာပြသနေသောပရိသတ်ကိုနှင့်လုပ်ဆောင်နေတဲ့မာလ်တီမီဒီယာပရိုဂျက်တာမြင်နိုင်ခြင်းဖြင့်တည်ဆောက်ဆဲသောဤထုတ်ကုန်လုပ်ဆောင်။ အလယ်အလတ်အလေးချိန်, breathability နှင့်ပျော့ပျောင်းသောထိတွေ့မှုနှင့်အတူဒီထုတ်ကုန်လတ်ဆတ်နှင့်သဘာ feeling ဖောက်သည်ထွက်ခွာ, တိတ်ဆိတ်တဲ့အိပ်စက်ခြင်းရဲ့အရည်အသွေးအတွေ့အကြုံကိုဖန်တီးပါလိမ့်မယ်။အီးမေးလ်:sales1@oujisdisplay.comTel / WhatsApp ကို: + 86-15728143369အီးမေးလ်:sales6@oujiadisplay.comTel / WhatsApp ကို: + 86-15626445117Oujia Introto ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းအဝတ်အစားအဝတ်အစား Store မှာ Display ကိုအမှတ်တရအဝတ်အစား Display ကို LED ကအလင်း Oujia နှင့်အတူ Store မှာအမှတ်တရစင်ပေါ်ထိန်သိမ်းတပ်ဆင်ထားရပ် 2.we စုံလင်သောထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်ရှိသည်, ကြှနျုပျတို့ပွုနိုငျပါသင်အလိုရှိအားလုံး
MDF Oujia ပါသော ခေတ်မီသံမဏိအ၀တ်အထည်စင်များ
YW-LED-2020N003အတောက်ပဆုံးမြင်သာသောအတွေ့အကြုံကိုတင်ပြသည့် စကျင်ကျောက်ပြားအောက်ခြေတွင် တောက်ပသောရွှေရောင်မတ်တပ်ရပ်။ LED မီးသည် မတ်တပ်ရပ်၏ တောက်ပသောအချက်ဖြစ်ပြီး၊ အလင်းရောင်ရှိသော အဝတ်အစားများတွင် အရိပ်များမရှိပါ။ ပြွန်များတွင် ဖုံးကွယ်ထားသော ကြိုးများ။ သုံးစွဲသူများသည် အလွယ်တကူ တပ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် tube အရောင်ကို စိတ်ကြိုက်လုပ်နိုင်ပါသည်။အီးမေးလ်-sales1@oujisdisplay.comဖုန်း/WhatsApp:+86-15728143369အီးမေးလ်-sales6@oujiadisplay.comဖုန်း/WhatsApp:+86-15626445117Oujia Introto Modern Stainless Steel Commercial Display Racks Shelves Marble Clothing Rack With MDF Oujia,6.our sale will provide perfect pre-sale, sale, after-sale service for you, contact us when up contact us.
လက်ဝတ်ရတနာ display ကိုရပ်တည်ချက်။ 360 ဒီဂရီ display ကိုသင့်ရဲ့လက်ဝတ်ရတနာ, လှည့်နိုင်ပါသည်။disassemble ရန်လွယ်ကူခြင်းနှင့်လွယ်ကူသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးရန်, စုဝေးလှပသောရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်, ခိုင်မာတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံ။အီးမေးလ်-sales1@oujisdisplay.comTel / WhatsApp ကို: + 86-15728143369အီးမေးလ်-sales6@oujiadisplay.comTel / WhatsApp ကို: + 86-15626445117Oujia BestQuality လက်ဝတ်ရတနာစက်ရုံထိန်သိမ်း, 5.we ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးသေချာစေရန်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုအသင်းရှိ
သံမဏိသတ္တုဖြင့် နံရံတွင်တပ်ဆင်ထားသော Led Display Shelf Rack နှင့် လက်လီအဝတ်အထည်ဆိုင်အတွက် Showcase Oujia အတွက် Cabinet
Matte black match တောက်ပသောရွှေရောင်သည် ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးလေသံဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ပုံမှန်စကျင်ကျောက်ပြားသည် လိုက်ဖက်ညီသည့်ပုံစံအသစ်စက်စက်ကို ပြသထားသည်။Awall တွင်တပ်ဆင်ထားသော မိုးပျံသိုလှောင်မှုစနစ်သည် သင့်ဆိုင်ရှိနေရာအား ထိရောက်စွာအသုံးချနိုင်သည်၊ စင်များနှင့်တွဲလောင်းဘားများအားလုံးကို နံရံတိုင်များမှ ခွာနိုင်သည်။အထည်ပေါ်တွင် LED မီးလင်းနေသဖြင့် အဝတ်အစားတွင် အလင်းရောင်လုံလောက်စွာ မရတော့မည်ကို စိုးရိမ်စရာမလိုတော့ပါ။အီးမေးလ်-sales1@oujisdisplay.comဖုန်း/WhatsApp:+86-15728143369အီးမေးလ်-sales6@oujiadisplay.comဖုန်း/WhatsApp:+86-15626445117Oujia Introto Stainless Steel Metal Wall Mounted Led Display Shelf Rack with Cabinet with Cabinet for Retail Clothes Shop Showcase Oujia၊2.ကျွန်ုပ်တို့၌ ပြီးပြည့်စုံသော ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်ရှိသည်၊ သင်လုပ်ချင်သမျှ ကျွန်ုပ်တို့လုပ်နိုင်သည်
တရုတ်နိုင်ငံ Oujia မှ ထုတ်လုပ်သူ LED မီးရောင် မီးပူတိုက် အထည်ဆိုင် မတ်တပ်ရပ် စိတ်ကြိုက် အဝတ်အထည်ဆိုင်
Oujia Introto အထည်ဆိုင် အရောင်းဆိုင် မတ်တပ်ရပ် LED မီးမီးသံ အထည်ချုပ်ခန်း Oujiaကျွန်ုပ်တို့သည် ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ခိုင်မာသောထောက်ပံ့ရေးစွမ်းရည်ရှိသည်။Oujia စိတ်ကြိုက်အ၀တ်အထည်ဆိုင် Stand LED Lighted Iron Garment Rack Oujia ထုတ်လုပ်သူ FromChina,6.our ရောင်းချမှုသည် သင့်အတွက် ပြီးပြည့်စုံသော ကြိုတင်ရောင်းချမှု၊ ရောင်းချမှု၊ ရောင်းချပြီးနောက် ဝန်ဆောင်မှုကို ပေးစွမ်းမည်ဖြစ်ပြီး ပြဿနာများတက်လာသည့်အခါ ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။
LED ထုတ်လုပ်သူ အကောင်းဆုံး တရုတ်အ၀တ်အထည် ဗီရို နံရံ သစ်သား ဖန်သားပြင် တွဲလောင်းစင် Rack - Oujia
Oujia China Clothes Cabinet Wall Wooden Display Hanging Shelf Rack with LED ထုတ်လုပ်သူ-Oujia၊ကျွန်ုပ်တို့သည် OEM / ODM ဝန်ဆောင်မှုကိုပေးဆောင်နိုင်သည် (သင့်ဆိုင်၏အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်း)Oujia Best China Clothes Cabinet Wall Wooden Display Hanging Shelf Rack with LED ထုတ်လုပ်သူ-Oujia ပေးသွင်းသူ၊ 1.ကျွန်ုပ်တို့သည် OEM/ODM ဝန်ဆောင်မှုကို ပေးဆောင်နိုင်သည် (သင့်ဆိုင်၏ အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်း)
BestQuality မိတ်ဆက် လက်လီလက်လီ နံရံကပ်အဝတ်များ တွဲလောင်း မီးရထား Oujia စက်ရုံ
Oujia မိတ်ဆက် လက်လီ နံရံတွင် တပ်ဆင်ထားသော အဝတ်များ တွဲလောင်း မီးရထား Oujia၊ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးကိုသေချာစေရန် ကျွန်ုပ်တို့တွင် အရည်အသွေးထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့ရှိသည်။Oujia BestQuality မိတ်ဆက် လက်လီအရောင်းဆိုင် နံရံကပ်အဝတ်များ တွဲလောင်းမီးရထား Oujia စက်ရုံ၊ 4.we ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ခိုင်မာသောထောက်ပံ့ရေးစွမ်းရည်ရှိသည်။
အထည်ပြကွက် လက်ကား - "အရည်အသွေးမြင့်မားမှု၊ သမာဓိရှိမှု၊ ဆန်းသစ်တီထွင်မှု၊ နှင့်အနိုင်ရရှိမှု" သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ စီးပွားရေးအတွေးအခေါ်ဖြစ်သည်။ OUJIA မှကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်တိုင်းကိုဖြည့်ဆည်းရန်အကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်များနှင့်အကောင်းဆုံး ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်နှင့်အတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ကြီးထွားရန်နှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် စိတ်ရင်းမှန်ဖြင့် စောင့်မျှော်နေပါသည်။ Oujia သည် အဝတ်အစားခင်းကျင်းခြင်း၊ လက်ကားအရောင်းပြခန်းများအတွက် အဝတ်အစားခင်းကျင်းပြသခြင်းအတွက် စိတ်ကြိုက်ဝန်ဆောင်မှုပေးပါသည်။ ထို့အပြင် ကျွန်ုပ်တို့သည် boutique အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းဝန်ဆောင်မှုများ ၊ OEM ကိုလည်း ပေးဆောင်နိုင်ပါသည်။& ODM ဝန်ဆောင်မှုကို ရရှိနိုင်ပါသည်။
OUJIA မှ ပရောဂျက်ဖြစ်ရပ်မှန်
Foshan Nanhai Oujia Hardware Display Co., Ltd သည် 2011 ခုနှစ်တွင် စက်ရုံထုတ်လုပ်သူအဖြစ် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး 2006 ခုနှစ်တွင် Guangzhou ၏ Baiyun ခရိုင်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ စက်ရုံနယ်ပယ်ကို ချဲ့ထွင်ရန်အတွက်၊ ယခု Foshan City တွင် ဤဒုတိယမြောက် စက်ရုံအသစ်ကို တည်ဆောက်ခဲ့ပါသည်။ အောက်ဖော်ပြပါတို့သည် အဝတ်အစားပြကွက်၊ အထည်ခင်းပြကွက်နှင့် Oujia ရှိ လက်လီအရောင်းဆိုင်/ဆိုင်ခန်းအတွင်းပိုင်း ဒီဇိုင်းစိတ်ကူးများ အချို့မှာ အောက်ပါတို့ဖြစ်သည်။
အရောင်းဆိုင် ဒီဇိုင်း ပေးသွင်းသူ | Oujia
ဤသည်မှာ OUJIA မျက်နှာပြင်ဖြစ်သည်။ဤရိုးရှင်းသော နံရံကပ်ရက်ကွက်သည် သင့်ဆိုင်ကို ဒီဇိုင်းဆွဲရန် အလွန်စျေးသက်သာပြီး ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပါသည်။အားလုံးကြိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်..ကျွန်ုပ်တို့ထံ အကြံပြုချက်အားလုံးကို ကြိုဆိုပါသည်။ဝဘ်ဆိုဒ်- https://www.oujiadisplay.comOujia Display Co.,Ltd သည် အရောင်းဆိုင်များအတွက် မတူညီသော ဖန်သားပြင်ကွက်လပ်များကို ဒီဇိုင်းရေးဆွဲရန် ကိုယ်ပိုင် ကျွမ်းကျင်သော ဒီဇိုင်းအဖွဲ့၊ ကွဲပြားသော ဒီဇိုင်းအိုင်ဒီယာများ အားလုံးသည် ၎င်းတို့ထံမှ ထိုက်တန်သော ရလဒ်ဖြစ်သည်။သင့်လက်လီအရောင်းဆိုင်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့အား ဒီဇိုင်းဆွဲလိုပါက 3D Drawings များပေးဆောင်နိုင်သည် သို့မဟုတ် သင့်အတွက် ဒီဇိုင်းဆွဲနိုင်ပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့သည် အဝတ်အစား၊ ခင်းကျင်းပြသထားသော စားပွဲ၊ ဧည့်ခံစားပွဲနှင့် ဖိနပ်စင် စသည်တို့အတွက် Gold Display Rack၊ display shelf နှင့် cabinet တို့ကို ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။
အကောင်းဆုံးကို Creative Virtual Reality အဝတ်အစား Store မှာအတွင်းပိုင်းကြည့်ရန် Layout ပေးသွင်း
ဖက်ရှင်အမှတ်တံဆိပ်အဝတ်အစားသည်ကို Creative Virtual Reality အဝတ်အစား Store မှာအတွင်းပိုင်းကြည့်ရန် Layoutအီးမေးလ်:sales1@oujisdisplay.comTel / WhatsApp ကို: + 86-15728143369အီးမေးလ်:sales6@oujiadisplay.comTel / WhatsApp ကို: + 86-15626445117Oujia အကောင်းဆုံးကို Creative Virtual Reality အဝတ်အစား Store မှာအတွင်းပိုင်းကြည့်ရန် Layout ပေးသွင်း, 4.we ကျနော်တို့ခိုင်မာတဲ့ထောက်ပံ့ရေးစွမ်းရည်ရှိသည်, ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ကြသည်။
အကောင်းဆုံးစတိုင်ဖက်ရှင်စတိုးပြည်ထဲရေး 3D ဆွဲပုံများများအတွက်အဝတ်အထည်ဆိုင် Fittings Store မှာ Display ကိုထိန်သိမ်းဒီဇိုင်းပေးသွင်း
စတိုင်ဖက်ရှင်စတိုးပြည်ထဲရေး 3D ဆွဲပုံများအဝတ်အထည်ဆိုင် Fittings Store ကိုပြရန်သည်ဒီဇိုင်းထိန်သိမ်းOujia အကောင်းဆုံးစတိုင်ဖက်ရှင်စတိုးပြည်ထဲရေး 3D ဆွဲပုံများများအတွက်အဝတ်အထည်ဆိုင် Fittings Store မှာ Display ကိုထိန်သိမ်းဒီဇိုင်းပေးသွင်းကျနော်တို့များမှာထိန်သိမ်းဒီဇိုင်းထုတ်လုပ်သူကျနော်တို့ကအကောင်းဆုံးဒီဇိုင်း, အဝတ်အစားစတိုးဆိုင် display ကိုထိန်သိမ်းအတွက်ခိုင်မာတဲ့ထောက်ပံ့ရေးစွမ်းရည်ရှိဆိုင်ထိန်သိမ်း ဖောက်သည်အဝတ်အစားအဘို့အ store.We ပု, အဝတ်ထိန်သိမ်း၏တရုတ်ထုတ်လုပ်သူအတွက်အများဆုံးပရော်ဖက်ရှင်နယ်များမှာအထည်ထိန်သိမ်း ကျနော်တို့ယုံကြည်စိတ်ချရသောအရည်အသွေး, အာမခံချက်အရည်အသွေးဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ဆိုင်ထိန်သိမ်းအပေါ်ကောင်းတစ်ဦးအလှဆင်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိထုတ်လုပ်ရန်။ လာနှင့်အတွေ့အကြုံနှင့်ကိုးကားရမှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်။
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဆင့်မြင့်အဆုံးမြန်ဖက်ရှင်အဝတ်အထည် Store ကိုလုံး Store ကဒီဇိုင်းသည်အခမဲ့ထုတ်လုပ်သူ
အမြင့်အဆုံးအခမဲ့သည်မြန်ဖက်ရှင်အဝတ်အထည် Store ကိုလုံး Store ကိုဒီဇိုင်းအီးမေးလ်-sales1@oujisdisplay.comTel / WhatsApp ကို: + 86-15728143369အီးမေးလ်-sales6@oujiadisplay.comTel / WhatsApp ကို: + 86-15626445117Oujia Professional ကမြင့်မားသောအဆုံးအစာရှောင်ခြင်းဖက်ရှင်အဝတ်အထည် Store ကိုလုံး Store ကဒီဇိုင်းသည်အခမဲ့ထုတ်လုပ်သူ, 5.we ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးသေချာစေရန်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုအသင်းရှိ
ကျွန်ုပ်တို့သည် မတူညီသောသတ္တုအမျိုးအစားများ (သံမဏိ/သံ) အဝတ်အထည်၊ ဘောင်းဘီ၊ အထည်အလိပ်ပြခန်း လက်ကိုင်အိတ်ပြကွက်များ၊ လက်ကားပြခန်းများနှင့် ခင်းကျင်းပြသထားသော စားပွဲများ၊ အဝတ်အစားခင်းကျင်းထားသော လက်ကားလက်ကားပစ္စည်းများနှင့် အခြားပစ္စည်းများ၊ စားပွဲများ၊ ဧည့်ခံပွဲများကဲ့သို့သော လက်ကားပစ္စည်းများ၊ slat နံရံများ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ထုတ်ကုန်များအပြင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် OEM ကိုလည်းပေးဆောင်ပါသည်။& ODM ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် စိတ်ကြိုက် အော်ဒါများကို လက်ခံပါသည်။ ထို့အပြင် သင့်ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်အတွက် အတွင်းပိုင်း ဒီဇိုင်း စိတ်ကူးစိတ်သန်း အချို့ကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့တွင် ဒီဇိုင်းအဖွဲ့ ရှိပါသည်။ အရည်အသွေးကောင်း၊ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော ဈေးနှုန်းများနှင့် စတိုင်ကျသော ဒီဇိုင်းများဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်ကုန်များသည် အာရှ၊ မြောက်ဘက်တွင် ရောင်းအားကောင်းပါသည်။ အမေရိက၊ အရှေ့ဥရောပ၊ အရှေ့အာရှ၊ တောင်အာရှနှင့် ယနေ့ခေတ် အရှေ့အလယ်ပိုင်း။
သင့်တွင် နောက်ထပ်မေးခွန်းများရှိပါက ကျွန်ုပ်တို့ထံ စာရေးပါ။
သင့်လိုအပ်ချက်များကို ပြောပြပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်စိတ်ကူးနိုင်သည်ထက် ပိုမိုလုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။